Iyini izinga lesikweletu? Incazelo encwadzini yezezimali
Qala ukubolekisa Wiki Ukuzilungiselela
Okthoba 17, 2017
Isikweletu semali esingu-5 sinenkampani noma umphakathi, izwakala okuningi. Kodwa lesi samba esiyisibonelo asihlinzeki ngolwazi mayelana nesikweletu senkampani, umasipala noma umbuso. Kunalokho, umuntu udinga izinga lesikweletu, naye Ukuzilungiselela, Kodwa-ke, izinga lesikweletu aligcini nje kuphela ngamakhokheni aphelele, kodwa ezinye izibalo zomnotho nazo zidlala indima lapha. Lokhu kufaka phakathi, isibonelo, imali engenayo, noma ngaphezulu, inzuzo eyenziwa. Lesi sigaba sinqunyiwe kusukela, ngemuva kokudonswa kwazo zonke izindleko, ukulingana futhi ingasetshenziswa futhi ukukhokha izikweletu. Ngokwezimali, isilinganiso senkokhelo sinqunywa isilinganiso phakathi kwezikweletu nokulingana.
Umehluko ngezinga lesikweletu
Ngaphandle kwezinga elijwayelekile lesikweletu, kunesinye isici. Lokhu kuhlanganisa, isibonelo, isilinganiso sesikweletu esinamandla. Ukubalwa kwesikweletu akusekelwe ekulinganisweni, kodwa ngokugeleza kwemali. Yiqiniso, lo mbuzo uvela, kungani kufanele umuntu anqume izinga lezikweletu kwenkampani, umasipala noma uhulumeni? Lokhu ikakhulukazi ngenxa yokuxhasa imali. Ngokuvamile kuyadingeka ukukhokhela izikweletu ezivela ebhange kanye nezinkampani zokuxhasa. Yiqiniso, bafuna ukubeka ingozi yokulahlekelwa ngesikweletu ngendlela ephansi kakhulu. Noma kunjalo, izitatimende zezezimali noma okunye okunjalo ngokuvamile kunikeza ulwazi oluncane mayelana nesimo sangempela semali. Kungenxa yokuthi ngokuvamile kuvamile ukulinganisa kuphela kuphela futhi ukubuka konke okushoyo akusho. Ngokuhlinzeka ngolwazi ngesilinganiso sezikweletu, amabhange angakwazi ukuhlola ukuthi ingabe imali ebolekiwe kanye nokukhokha okukhokhayo kanye nezindleko zenzalo nazo ziyasebenza. ukuphakama kwezinga lesikweletu, imali engenasiphala yenkampani noma umasipala. Ngakho-ke, ngokukhuphuka futhi ukwehla kwezimali kuyancipha, lapho kungabangela ukuthi leyo malimboleko engasekho noma engeke ifinyelele ekuphakameni okufunayo. Futhi ngisho noma amabhange asaqhubeka ebolekisa, angase abe nezithakazelo eziphezulu noma adinga ukubambisana. Yini engakugcina ibe yindulungu kaDeveli, ngoba lokhu kungaholela ekukhuphukeni okwezinga lesikweletu, okwenza kube nomthelela omubi ekusimeni kwezikweletu nakwezomnotho.
Kungaba nemiphumela emibi njengomkhawulo ongaphezulu
Noma kunjalo, izinga lokuboleka alikwazi ukunganakwa kwezinye izici. Uma, isibonelo, izivumelwano zezimali zisekhona kakade, umkhawulo ongaphezulu wezikweletu ungasethwa. Lokhu kuhlanganiswa ngesilinganiso sesikweletu-kuya-equity. Uma leli zinga lidlulile, lokhu kungaba nemiphumela emibi kakhulu. Uma kuyinto yenkontileka, kungukuphula isivumelwano. Ngokuvamile, ngemva kwesikhathi esifushane sokunciphisa isikweletu, izivumelwano zokuxhasa imali ziphelile. Lapha, ke, ilungelo elingavamile lokuqedwa, okuzoholela kuzo zonke izimangalo zemali ngenxa yokukhokha ngqo. Njengoba kungabonakala kulokhu, izinga lesikweletu alikwazi nje kuphela ukuhlinzeka ngolwazi oluningi kodwa futhi luyingxenye ebalulekile yesivumelwano. Ngakho-ke, izinkampani ziyakhathazeka ngokujwayelekile ukugcina izinga lesikweletu liphansi ngangokunokwenzeka.
Isihloko sangaphambiliniAC Isaphulelo credit